Aqriso magacyada Dadka ku dhintay weerarkii kismaayo oo uu ku jiro musharax madaxweyne doorashada jubbaland – XAMAR POST
Aqriso magacyada Dadka ku dhintay weerarkii kismaayo oo uu ku jiro musharax madaxweyne doorashada jubbaland
Wararka inaga soo gaarayo Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in saakay la soo afjaray weerarkii lagu qaaday Hotel Cascasey ee Magaalada Kismaayo.
Dadka ku dhintay weerarkaas waxaa ka mid ah Maxamed Shuuriye, oo ahaa musharrax u taagnaa qabashada xilka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubaland.
Maxamed Shuuriye oo ahaa Musharax ku dhintay weerarka Kismaayo
Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab ayaa xalay ku hoyday dhismaha Hotelka, waxaana la maqlayay rasaas ay isweydaarsanayeen Ciidamada Ammaanka Jubbaland iyo Kooxdii weerarka qaaday.
Saraakiil katirsan Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa Mustaqbal u sheegay in ciidamada Jubbaland ay dhowr jeer isku dayeen in ay gudaha u galaan, balse iska caabbin ay kala kulmeen kooxdii weerarka ku qabtay Hotel Cascasey.
Inta la xaqiijiyay waxaa geeriyootay ku dhawaad 10-ruux, waxaana kamid ah: Hodan Naaleeye oo ahayd Gabar Caawin jirtay Haweenka danta yar, sidoo kale ahayd Wariye madaxbanaan oo aas aastay Integration TV, Seygeeda oo lagu magacaabi jiray Fariid Jaamac, waxa uu mar soo noqday Wasiir katirsanaa golaha Wasiirada Dowlad Goboleedka Jubbaland.
Hodan Naaleeye oo ah Haweeney ku dhimatay Kismaayo
Fariid Jaamac oo ah Seyga Hodan Naaleeye, ahaana wasiir hore oo katirsanaa Jubbaland
ale dadka geeriyooday ee la helay Magacyadooda iyo xogtooda waxaa kamid ah, Maxamed Sahal Cumar (Gacma dheere) oo kamid ahaa Suxufiyiin hotelka ku sugneed Xiligii uu weerarka dhacayay iyo Deeq Ciise Wabi oo la shaqeynay Hay’ado aan Dowli ahayn.
Ciidamo iskaashanaya oo isugu jiro Soomaali iyo Ajaanib ayaa isku gedaamay dhismaha Hotelka oo ay gudaha ugu jiraan kooxdii weerarka ku qaaday Casir liiqii shalay.
Isbitaalka Magaalada Kismaayo waxaa la geeyay dad dhaawacyo kala duwan soo gaaray, waxaana xalay u tagay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Madaxweynaha Jubbaland oo tagay Isbitaalka Kismaayo
Dadka Kismaayo ayaa xalay ku hoyday Jawi colaadeed, waxaana ay maqlayeen daryanka rasaaska iyo bambooyinka gacanta laga tuuro oo gudaha Hoteelka ka dhacayeen.
Al-Shabaab ayaa saakay warbaahintooda ku sheegtay in iska hor imaadka uu wali socda, isla markaana ay wali dhismaha hotelka ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada katirsan ee weerarka fulisay.